बाढी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुरू | चितवन पोष्ट
बाढी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुरू
भरतपुर । चितवनमा कति पानी प¥यो ? नारायणी र राप्ती नदीमा बाढीको तह कति बढ्यो ? यो कुराको जानकारी अब एकै थलोबाट पाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हातामा शनिबारदेखि जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (डीईओसी) सुरू भएको छ ।
नारायणी र राप्तीको बाढीको तह र त्यस क्षेत्रमा परेको पानीको विवरण डीईओसीमा रहेको डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा उल्लेख भइरहेको हुन्छ । केन्द्रमा चौबीसै घण्टा चार जना कर्मचारी बस्नेछन् । दुई जना जनपद र दुईजना सशस्त्रका प्रहरीहरु अहिले केन्द्रमा छन् ।
‘बाढीको पूर्व सूचना लिने र तयारी रहन समुदायमा जानकारी पु¥याउने तथा क्षति भएमा विवरण संकलन गर्ने काम यहाँबाट हुनेछ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत विपिन क्षेत्रीले भने । जल तथा मौसम विभागले नारायणीको देवघाट र राप्तीको रजैयामा बाढी र वर्षा मापन केन्द्र राखेको छ ।
‘सोही केन्द्रले मापन गरेको विवरणहरु यहाँको डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा आउने हो । यहाँबाट समुदायस्तरमा जानकारीहरु प्रसार गरिन्छ । समुदायमा भएका क्षतिका विवरणहरु पनि संकलन गरिन्छ’ चितवन जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत बलराम लुँइटेलले भने ।
नारायणी नदीमा देवघाटनजिक पानीको सतह छ दशमलब आठ मिटर नाघेमा चेतावनीको विन्दु पार हुन्छ । त्यस्तै, आठ मिटर नाघेमा खतराको विन्दु पार हुन्छ । देवघाटमा खतराको विन्दु पार भएको तीन घण्टाभित्रै मेघौली आसपासमा बाढी आउँछ ।
‘त्यसैले देवघाटको पानीको तह हेरेर तल्लो तटीय क्षेत्र रहेको मेघौली, दिब्यनगर, गुञ्जनगर र मंगलपुरमा नदी आसपास बस्ने स्थानीयलाई सर्तक रहन र बाढीबाट बच्न सहयोग गर्न सकिन्छ’ जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत लुइँटेलले भने ।
राप्ती नदीमा पानीको तह तीन दशमलव तीन मिटर पुगे चेतावनीको विन्दु पार हुन्छ । त्यस्तै, तीन दशमलव सात मिटर पुगे खतराको विन्दु नाघ्ने सूचना अधिकृत लुईटेलले जानकारी दिए । रिउ खोलामा यस्तो प्रकारको संयन्त्र छैन ।
‘त्यहाँ भने स्थानीयले बाढीको निगरानी गर्ने र मोवाइल फोनबाट अन्यत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ’ जिल्ला विकास समिति चितवनका सूचना अधिकृत तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धित व्यक्ति लुइँटेलले भने ।
चितवनमा नारायणी, राप्ती जस्ता ठूला नदी र रिउ, कयर, लोथरजस्ता खोलाले वर्षायाममा विपत् निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । बाढी र डुबानका दृष्टिले चितवन जोखिमको ११ औं स्थानमा रहेको लुइँटेलले जानकारी दिए ।
‘बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा उपल्लो क्षेत्रमा पानीको अवस्था के छ भन्ने जानकारी महत्वपुर्ण हुन्छ’ विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत प्राक्ट्रिकल एक्सन नेपालका बुद्धि कुमालले भने । देवघाटमा पानीको अवस्था थाहा नपाउने हो भने मेघौलीका बासिन्दालाई जोगाउन गाह्रो हुने उनले बताए ।
डीईओसीलाई मजबुद बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ । गृह मन्त्रालयले अधिकृत तहका दुईजना कर्मचारी राखेर सो केन्द्रलाई बाढी पूर्व सूचनाको साथै उद्धार र राहतका काममा पनि परिचालन गर्ने एकाइ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।